TDF, OLA operations continue – Ayyaantuu
HomeEnglishTDF, OLA operations continue
TDF, OLA operations continue
Ethiopia: TDF | Wichale town Amhara region | Mount Guna
Oduu WBO. Amaarri Moo’ame. Suudaan Diroonii Itoophiyaa. Faransaay Itoophiyaa Gargaarsa Dhowwatte…
Waliigaltee WBOfi TPLF ilaalchisee yaada koo…
Soure: Malkaa Hawaas
“Shaneefi Juntaan waliigaltee taasisan” (OPDO)
“ህወሃትና ኦነግ ሸኔ ተስማምቷል” (Habashoota Abiyyiin deeggaran)
“ህወሃትና ኦነግ ተስማምቷል” (Amaara)
“የትግራይ መንግሥት ከኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ጋር ስምምነት አድርጓል” (TPLF)
“Oromo Liberation Army and Tigray forces agree to work together” (Faranjoota)
“WBOn TPLF wajjiin waliigaltee taasise” (WBO)
Kan armaan olitti barreesse akkaataa qaamonni adda addaa dhimma waliigaltee WBOfi warroota Tigraay jiddutti ta’ame irratti gabaasan mul’isa. Namuu akkuma ofii barbaadatetti barreeffataa jira. Kun mataan isaatuu siyaasaa guddaadha.
Amma waa’een waliigaltee humnoota Tigraayiif WBO gudduutti taasifame ajandaa guddaa ta’aa jira. Akkuma Oromoo gartuleen Amaaraafi kan Tigrees ajandaa godhatanii jiru. Tigreen gammachuu keessa jirti. Warri Immiyyee rifaatee alba’aa jira. Kan Oromoo ammoo burreedha. Gariin aaree jira. Gariin gammadee jira. Gariin hadoodee jira. Gariin ammoo burjaaja’ee jira.
Oromoon osoo akka warra Tigraayitti gammadee gaarii ture. Osoo akka warra Amaaraatti afaan tokkoon rifatees gaariidha. Gariin gammadee, gariin aaruun, gariin hadoodee gariin burjaaja’uun gaarii miti. Tokkummaa ummataa addaan qooda. Hayyoota Oromoo addaan qooda. Nama yaachisa!
Qabiyyeen waliigaltee jara kanaa sirritti ibsamuu baatus waliigaltee waraanaa (military alliance) kan jedhan sani. Waliigalteen kuni “diina waloo irratti waliin duuluu malee wal irratti hinduullu” jechuudha. “Ani si hin tuquu atis na hin tuqin” jechuudha. Haala qindaa’een waraana adeemsisuu dabalata. Meshaa waraanaa waliif kennuu, namoota walii lenjisuufi walii ergisuu fa’as dabalachuu danda’a. Hojii ololaa (pirooppaagaandaa) fi kan diippiloomaasiitiinis wal gargaaruu ni dabalata. Kun waligaltee waraanaa (military alliance) jedhan sani.
Waligalteen dhaabbilee siyaasaa jiddutti taasifamu kan biraa kan siyaasaati. TPLFfi WBO jiduutti waligalteen siyaasaa (political agreement) taasisuufi dhiisuu isaani wanti beekkame hinjiru. Kuni garuu of eeggannoo cimaa barbaada.
Akka miidiyaa irraa dhageennetti qaamonni waliigaltee kana irratti maqaan isaanii dhawame TPLFfi WBOdha. Ana qaamni sadaffaanis waan jiru natti fakkaata. Innis faranjiidha. Keessattu Ameerikaa! Maaliif?
Humni guddaan Tigraayiin gargaaraa jiru faranjiidha. Deeggarsa siyaasaafi diippiloomaasii ni kennuuf. Kan mallaqaa ni keennu. Who knows, deeggarsa meeshaa waraanaas ni laatuuf. Zamana kana moobaayiliin saatalayitiin hojjatu mataan isaatuu meeshaa waraanaati. Kanaafuu TPLF gorsaafi deeggarsa Ameerikaan ala J/Maroo wajjiin hojjachuuf waan murteessan natti hinfakkaatu.
Ameerikaan akkuma warra Tigraay J/Maroo fa’a waan qunnamtee amansiifte natti fakkaata.
Waliigalteen TPLF fi WBO Ameerikaan dhiibbaa mootummaa Abiyyi irratti gootuu cimsuuf akka murteessite agarsiisa. Waliigalteen kun TPLFfi WBO qofa gidduutti waan dhaabbatuu miti. Yeroo muraasa booda qaamoleen biroos itti dabalamu jedheen yaada.
So, Ameerikaan gurmuu (coalition) gaafa Abiyyi dadhabe mootummaa ta’u ijaaraa jirti. They are building a coalition that will take over power from Abiy Ahmed. Ameerikaan gaafa mootummaan tokko daaqe waan akkanaa gochuun amala isiitti. Gaafa mootummaan Dargii kufu hojjii kana hojjatte. Gaafa waayyaaneen kuftes waan kana hojjattee jirti. Biyyoota biroo kan akka Afgaanistaan, Somaaliyaa, Iraaqfi kan biroos baqattoota biyya ambaa jiran hunda walitti qabdee akka mootummaa ijaaran gootee jirti. Kanaaf TPLF, WBOfi kan biraa walitti dhoobdee ijaaruun isii hin rakkisu.
Ana waliigalteen TPLFfi WBO gidduutti taasifame na hin rifachiisu. Na hin gammachiisus. Kan yaada natti ta’u qabsoo Oromoo ni laaffisa moo ni jabeessa kan jedhuudha. Kanaaf safartuun koo tokkummaa Oromoo ni cimsa moo ni laaffisa kan jedhudha? Cimsinaan bu’a-qabeessa. Laaffifnaan ammoo kasaaraa guddaadha.
Waliigalteen kun qaamota humna walfakkaatu hinqabne jidduutti taasifame. TPLF humna waraanaa guddaa qabdi. Muuxannoo guddaa qabdi. Jaarmaya cimaa qabdi. Deeggarsa ummataa cimaa qabdi. Deeggarsa biyyoota alaa guddaa qabdi. Maallaqaafi meeshaa waraanaa ni qabdi. Biyya too’attee bulchitu qabdi. WBOn ammoo ammatti Rabbii isaa malee homaa hinqabu! Kanaafuu waliigaltee kana keessatti qaama humna xiqqaa qabu (junior partner) ta’a jechuudha!
Humna xiqqaa qabatanii waligaltee keessa seenuun milkaa’ina ni hir’isa. Fakkeenya haa ilaallu:
Qabsoo mootummaa Dargii kuffisuuf taasifame keessatti Shaabiyaan, TPLFfi ABOn wajjiin hojjataa turan. Gurmuu kana keessatti humnaan 1faa kan ture Shaabiyaadha. Lammaffaan TPLF. ABOn macuu ture! Maal argatan? Shaabiyaan biyya mataa ofii uumate. Buufata doonii (ports) Itoophiyaan qabdu fudhatee kute. TPLF ammoo Itoophiyaa fudhatee waggoota 27 bulche. ABOn baatii muraasa booda kaalchoon dhawamee biyyaa baye! An ammas “deeboon sun way deebiti” sodaa jedhun qaba. Isin hoo?
Namoonni tokko tokko amma yeroon kan 1991 miti jedhu. ABOnis Oromoonis kan gaafasii miti jedhu. Well, dubbiin ijaarama keessa jirti. Oromoon amma kan bara 1991 caala ijaaramee jira? ABOn hanga bara 1991 deeggarsa ni qabaa? Hanga bara 1991 tokkummaa keessoo ni qabaa? Hammas ummataan quba wal qabaa? You answer it!
Oromoon kan bara 1991 caala dhaabota siyaasaa humna qaban hedduu qaba. Kun waliigaltee WBOn TPLF waliin taasise irratti dhiibbaa guddaa ni qaba!
Amma waliigaltee TPLFfi WBO abaaruun hinbarbaachisu. Akkaataa waliigalteen kun gara waliigaltee ummata Tigraayiifi ummata Oromoo ta’u irratti hojjachuun wayya. Dursee garuu Oromoon ofii wal mari’atee hubannoo tokko irra gahuu qaba. Waliigaltee taasifame kana irratti yaada wal jijjiiree hubannoo walfakaatu uumuu qaba. Wal harcaasuun faayidaa hinqabu. Namoota mana hidhaa jiran, haayyootaafi beektonni irratti mariisifamuu qabu. Neetworkiin adda addaa uumamuu qaba. Erga ummanni Oromo wal hubateen booda mariin bal’aan hayyoota Tigraayiif kan Oromoo gidduutti taasifamuu qaba. Kun J/Marroof humna laata!
Deeggarsi ummataa humna siyaasaa namaaf laata. Tumsa ormaa dura tumsaafi deeggarsa ummata ofii argachuu wayya. Ormaan tokkoomuu caala ummata ofii tokkoomsuu wayya.
Waliigalteen TPLFfi WBO gidduutti taasifame faayidaa ni qaba? Eeyyee ni qaba. TPLFf faayidaa guddaa qaba. Oromoof hoo? Depends on how we handle it. Hanga ammaatti addunyaan waa’ee miidhaa unmata Tigray irra gahe malee kan Oromoof gurra laataa hinturre. Amma booda kan Oromootis akka dhagawu carraa laata. Kun gaariidha.
Yaada walii galaaa….
Waliigaltee TPLFfi WBO gidduutti taasifame busheessuun hinbarbaachisu. Waan OPDOf habshaan jettus ilaalanii jeeqamuunis hinbarbaachisu. Gammachuu warra Tigray ilaalanii gammadanii machaa’uunis hin barbaachisu.
Tigray ykn warra Immiyyee waliin michoomuun qofti siyaasaa Oromoof fala hinta’u. Falli siyaasaa tokkummaa Oromoo keessa jira. Wal hubannoo uumanii waliin hojjachuu keessa jira. Qeerroon yoo gurmaa’e aarsaa xinnaan diina ari’uu ni danda’a. Kana qabatamaan agarsiisee jira! Fuulli keenya garas haa deebi’u!
TPLF diina Oromooti. Warri Immiyyee diina Oromooti. Abiyyiif OPDOn diina Oromooti. Firri Oromoo Oromummaafi tokkummaa isaa qofa!
Kun yaada kooti. Keessan itti laadhaa!
Ethiopia: Afar Amhara | Billene Seyoum The current OLA advances are part of 4 concurrent…
France suspends military cooperation agreement with Ethiopia